Mashiinka taxanaha alaabtan wuxuu adeegsadaa matoorka gaaska ee Guangxi Yuchai, kaas oo ah soo saaraha mashiinka gubashada gudaha ee caanka ku ah Shiinaha. Mashiinka gaaska ayaa la wanaajiyay lana wanaajiyay si wadajir ah shirkadda NPT.
Qeexitaanka alaabta ee Generator Gas Gas 200KW
Awood la'aanta adduunka ee hadda jirta ayaa marba marka ka dambaysa soo shaac baxaysa, dadka shuruudaha ay u qabaan ilaalinta deegaanka ayaa sidoo kale sare u sii kacaya.
Maaddaama ay tahay kayd koronto oo loogu talagalay shabakadda korantada, soo-saare aamusiyaha ayaa si ballaaran loo isticmaalay sababtoo ah buuqooda hooseeya, gaar ahaan isbitaallada, hudheelada, meelaha ay ku nool yihiin dadka ugu sarreeya, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto iyo meelaha kale ee leh shuruudaha adag ee jawiga waa lama huraan lama huraan ah qalabka.
qeexida sheyga ee gaaska dabiiciga gaaska / dhaliyaha gaaska
Matoorka gaaska wuxuu korsadaa matoorka gaaska salka ee HuaBei mishiinka naaftada, kaas oo ay fasaxday DEUTZ. Matoorku waa tikniyoolajiyadda Jarmalka.
Waxyaabaha taxanaha ah ee NS waxay adeegsadaan mashiinka gaaska ee saldhigga SDEC Power.
Taxanaha alaabtan waxay leeyihiin waxqabad koronto oo aad u fiican, dhaqaale, isku halayn iyo kharash yar oo hawlgal, kuwaas oo si qoto dheer ay u jecel yihiin dadka isticmaala.
Qeexitaanka alaabada ee Gaaska Dabiiciga / Generator-ga Gaas
Badeecadu waxay leedahay waxqabad aad u fiican, waxqabad bisil oo lagu kalsoonaan karo iyo caan caan ah. Badeecadu waxay leedahay faa'iidooyinka waxqabadka bilowga wanaagsan, awood ku filan, buuq yar, hawlgal xasilloon iyo kalsooni xoog leh. Waxaa sidoo kale si aad ah loogu adeegsadaa gaaska noolaha, gaaska dabiiciga ah iyo warshadaha kale.
Qeexitaanka alaabta 30 KW Gaaska Dabiiciga / Generator-gaaska
Qeexitaanka alaabta ee 10 Kw Gaaska Dabiiciga / Generator-gaaska